Dacwadda loo heysto Cumar Al Bashiir oo ‘lagu qaban karo Suudaan’ |
Dacwadda loo heysto Cumar Al Bashiir oo ‘lagu qaban karo Suudaan’
Dhageysiga dacwadda loo heysto madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Xasan Al Bashiir ayaa lagu qaban karaa gudaha dalkaas intii lagu maxkamadeyn lahaa xarunta maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee The Hague, sida laga soo xigtay koox u ololeynso arrintaas.
Arbacadii, hogaamiyaha Suudaan, Janaraal Cabdul Fataax Al Burhaan wuxuu ha’yadda xuquuqul insaanka ee Human Right Watch u sheegay in iskaashi ay la sameyn doonaan maxkamadda ICC si loo maxkamadeeyo Al Bashiir iyo ragga kale.
Balse hogaamiyeyaasha dalka ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay suurtagalnimada ku aadan in dacwadda Al Bashiir lagu qaban karo Suudaan ama in dalka ay imaan karaan garsoorayaal kaso socda maxkamadda ICC, sida uu BBC u sheegtay Mausi Segun oo ka tirsan ha’yadda Human Rights Watch.
Al Bashir ayaa wajahayaa eedeymo la xiriira xasuuq iyo dambiyo dagaal, kuwaas oo dhacay markii uu socday dagaalkii gobolka Daarfuur sannadkii 2003-dii.
Cumar Al Bashiir ayaa xilka laga tuuray bishii April ee sannadkii lasoo dhaafay.
Wuxuu xilka kula wareegay inqilaab militari sannadkii 1989-kii.